MATUPI RALHRANG THILTUAH NING CU LUNGRAWK TAKTAK SI KO CANG – The Chinlung Post
MATUPI RALHRANG THILTUAH NING CU LUNGRAWK TAKTAK SI KO CANG
August 22, 2021 admin Chin 0
Chin ramkulh Matupi khua chungah ralhrang Kawlralkap hna nih khualtlawng pawl check hlatnak an tuah hna. Cu konghe pehtlai in Matupi khua chung leakiagkap khuate lei ramleng or Khualeng chuak, Lo kal mi zomg check hlatnak an tuah hna. Zaan hmanh ah leng zong an chuak ngam hna lo tiah The Hakha Times sin ahachim.
Hi konghe pehtlaiinaliamcia Kan hnu lei te ah Matupi khahmaya-309 nih CDFasi tiah an ruah mi or an lunghrinhmi khuami Mino pakhat an tleih hnu inatubantuk in aa chawk hlatmi check hlatnak an tuah hna hiasi i, an tleih mi pakhat zong ralhrang kawlralkap hna nihatu tiang an thlah rih lo. An tleih mi pa zong ralhrang kawlralkap hna nih fak ngai in an hrem hnu ah kan in halmi hman tein na chim cun kan in thlah lai an ti.
Cu an cawlcangh ning konglamachimh dih hna. Matupi peng chung ah khahlaya-140 le khahmaya-309 nih hmunhma an khuar i, ralhrang kawlralkap hna cu hlannak fak deuh in cawlcangh hram an thok cang. Hi konghe pehtlaiin Chin ramkulh Thantlang khua chung zong ah zahan zaan in ralhrang kawlralkap hna cu tam ngai an phan tiah thawng kan theih.
Kawlca in relchihaduhmi caah fiangtein rel khawh asi. ချင်းပြည်နယ် မတူပီမြို့နယ်အတွင်း လူသွားလူလာများ၊ ခရီးသွားလာသူများကို အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က တင်းတင်းကြပ်ကြပ် စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း သိရသည်။ ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဒေသခံတစ်ဦးက မတူပီမြို့နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာတွေမှာ တော်တော်ကြပ်တယ်။ တောထွက်တာ၊ တောင်ယာ၊ လယ်ယာတွေမှာ သွားတဲ့သူတွေကို စစ်ဆေးတာတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လုပ် လာတယ်။ ညမှာဆိုရင် အိမ်အပြင်ထွက်ဖို့ လူထုက ကြောက်နေကြတယ် ဟု ဟားခါးတိုမ်းကို ပြောပြသည်။
မကြာသေးခင်က မတူပီမြို့အခြေစိုက် ခမရ- ၃၀၉ တပ်ရင်းရုံး ဂိတ်တွင် CDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟု ယူဆရသူ လူငယ် တစ်ဦး ဖမ်းဆီးရာမှ ယခုကဲ့သို့ လူသွားလူလာ စစ်ဆေးမှု ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်လာကြောင်း၊ ဖမ်းဆီးခဲ့သည့် လူငယ်သည် စစ်ကောင်စီတပ်များက ဆက်လက် စစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါဒေသခံ ဆိုသည်။ အဲဒီဖမ်းထားတဲ့လူငယ်ကို အမျိုးမျိုးစစ်ဆေးတယ်၊ နှိပ်စက်တယ်လို့ကြားတယ်။ မေးတာကို မှန်မှန်ပြောရင် လွှတ်မယ်ဆိုလို့ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခြေအနေ အကုန်ပြောချလိုက်တယ်လို့ ကြားရတယ်။
ဘာတွေပြော သလဲ၊ ဘယ်သူ့နာမည်တွေပါသလဲ ဆိုတာတွေတော့ မသိပေမဲ့ သူတို့လှုပ်ရှားမှု အခြေအနေ အကုန်ပြောချ လိုက်တယ်လို့ သိရတယ် ဟု ဒေသခံတစ်ဦးထံမှ သိရသည်။ မတူပီမြို့ပေါ်တွင် စစ်ကောင်စီတပ်များကို ဗျူဟာရုံး၊ ခလရ- ၁၄၀ နှင့် ခမရ ၃၀၉ စသဖြင့် တပ်ရင်းရုံးများ ချထားရာ ယခင်ကထက် စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများ ပိုမိုလုပ်လာကြောင်းနှင့် ချင်းပြည်နယ် ထန်တလန်မြို့ပေါ်တွင်လည်း ယမန်နေ့မှစ၍ တပ်အင်းအား အလုံးအရင်းဖြင့် ဝင်ရောက်လာကြောင်း သိရသည်။ Credit: The Hakha Times.
HLEN ZUMH SI PENG HI NINGZAK A SI TUK CANG EH
THANTLANG PENG THAWNGPANG, KHUATE CHEUKHAT HNA CU